ဒါနွေ ဦး ရာသီလား | Martech Zone
ဒါနွေ ဦး ရာသီလား
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 3, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ဒီတစ်ပတ်ငါအားလပ်ရက်သွားမယ် ဒါဟာငါကကျယ်လောင်စွာထွက်ပြောနေ chuckle စေသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏အားလပ်ရက်သည်ယခုအချိန်အထိမည်သို့မည်ပုံရှိသနည်း။
ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ဒါဇင် (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များ၏ဆိုဒ်များ) သည်ယခုအချိန်တွင်အဆင့်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါဆိုဒ်များသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးနှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်သောဆာဗာများသို့ပြောင်းရွှေ့နေသည်။ ဒါကသင်တန်း၏, စေပါတယ် DNS ကို ပြနာများ (ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနှင့်ဖောက်သည်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်တစ်ညလုံး… spam စာမျက်နှာသို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ ) database ဆက်သွယ်မှုပြissuesနာများ၊ ဗားရှင်းပြissuesနာများ၊ အခင်းအကျင်းပြproblemsနာများ၊ ငါမနက် 6:30 pm အထိကိစ္စများပြုပြင်တာတွေသည်အထိဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ site တစ်ခုကျန်ရှိသည် (yea, တူညီတဲ့!) ။
ကျွန်ုပ်တွင်ယခုသီတင်းပတ်အတွင်းဖွင့်နေသောကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိတော့အတော်လေးကောင်းသွားပြီ ငါ၏ binary Geographic database ကိုတင်ပြီးပါပြီ Maxmind မှ IP လိပ်စာများ နှင့်လာရောက်လည်ပတ်သူအသုံးပြုသူအပေါ်အခြေခံပြီး auto- စင်တာမြေပုံလိမ့်မည်ဟုရေးသားထားသောကုဒ်။ ၏အခမဲ့ဗားရှင်း API ကို တိကျမှုမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အနည်းဆုံးလူအားမှန်ကန်သောဒေသသို့ညွှန်ကြားသည်။
User Interface ကိုပိုမိုသန့်ရှင်းစွာကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် WordPress အတွက်ပလပ်ဂင်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အလုပ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်ကမပြောင်းလဲပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အသွင်အပြင်နဲ့ခံစားမှုကအများကြီးတိုးတက်လာတယ် (အောက်ကိုကြည့်ပါ) ။ ငါထံမှ Sean မေးတယ် Laptop နှင့်အတူ Geek ငါ့ကိုကူညီဖို့ရန် ငါ WP ဒီဇိုင်းများနှင့် cross-browser ပြissuesနာများနှင့်အတူအဆင်ပြေပါတယ်, ဒါပေမယ့် Sean ဒီတစ်ခုအိမ်သို့ယူဆောင်နိုင်သေချာပါတယ်။
နှင့်သင်တန်း၏, ငါ့ကလေးတွေအိမ်မှာဖြစ်ကြသည်။ ငါ့သားကပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတာပေါ့ အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်။ ကျွန်တော့်သမီးက“ ရည်းစားထားတယ်” အပြည့်ပါ။ ဒါကြောင့် Grand Central ဘူတာလိုဆယ်ကျော်သက်များထွက်ပြေးထွက်လာရင်းဖုန်းကမရပ်မနားမြည်နေသည်။ ငါပြတင်းပေါက်ကထွက်ခုန်တော့မယ် ကံကောင်းတာကငါဒုတိယထပ်မှာရှိနေတယ်။
ကျွန်ုပ်၏တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုတိုးမြှင့်လိုသည့်ဤထပ်ဖြည့်ပါ (ကျွန်ုပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနှစ်စဉ်ဝင်ငွေအတော်အတန်လျှော့ချခဲ့သည်) ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏သီတင်းပတ်သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်နေ့လည်စာများပြည့်နှက်နေသည်။
အားလပ်ရက်အတွက်ဘယ်လိုနေလဲ ငါအနားယူဖို့အလုပ်ပြန်ရရန်မစောင့်နိုင်ပါ! (မဟုတ်!)
ကျွန်ုပ်၏ Feed ကိုဖတ်ပြီး ၁၂ လအခမဲ့ Web Hosting ကိုရယူပါ
အဆိုပါ Letterpress, စာစီစာရိုက်နှင့် Pulp ထူးအိမ်သင်
ဧပြီ 3, 2007 မှာ 7: 10 pm တွင်
ဧပြီ 3, 2007 မှာ 8: 32 pm တွင်
ဟေ့ Doug, သင် admin ရဲ့ plugin ကိုပေါ်တွင်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ငါကလူတွေအတွက်စိတ်ကြိုက် WP plugins တွေအများကြီးလုပ်ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်အများပြည်သူထံထုတ်လွှင့်တာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး၊ နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုထပ်မံပြုလုပ်ပြီးလျှင်မကြာမီပြောင်းလဲတော့မည်။
မင်းရဲ့အချိန်ဇယား ... အကယ်၍ အားလပ်ရက်အချိန်ခွင့်ပြုမယ်🙂 you မင်းကိုတာယာတွေချခိုင်းတာကိုငါနှစ်သက်ပါတယ်။
ဧပြီ 3, 2007 မှာ 10: 40 pm တွင်
ဧပြီ 4, 2007 မှာ 1: 17 AM
ခင်ဗျားပြောခဲ့တဲ့ WordPress plugin ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်။ ထူးဆန်းတာက posting interface မှလွဲ၍ WP rock တွေအကြောင်းအရာအားလုံး! ကျွန်တော့်ရဲ့ပြproblemsနာကအဲဒါတွေဟာရှုပ်ထွေးလွန်းနေတယ်၊ ​​သင်ကရှုပ်ပွနေအောင်ဖယ်ထုတ်ပြီးမင်းရဲ့အရေးအသားကိုအာရုံစိုက်လို့မရဘူး။